Mareykanka oo cambaareeyey xukunkii labaad ee Navalny
Hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Aleksey Navalny ayaa 22-ki bishai Marso, lagu xakumay 9 sano oo kale oo uu ku qaadan doono xabsi si aada loo ilaaliyo.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price ayaa cambaareeyay “eedaha iyo xakunka siyaasadeysan ee Navalny kaas oo wata eedeymo been abuur dheeraad ah.”
Dowladda Mareykanka ayaa si is-xig-xigta ugu boorrisay Dowladda Federaalka Ruushka in ay si deg deg ah oo aan wax sharuud ah ku xirneyn u sii deyso Aleksey Navalny isla markaana dhameyso ololaha ka dhanka ah ururadiisa iyo kuwa xiriirka dhaw la leh.
Muddada xabsiga xad-dhaafka ah, waa sii wadista uu Kremlin-ka sii waddo weerarada uu muddada dheer ku hayay dhaq-dhaqaaqa Navalny ee la xiriira isla xisaabtanka iyo daah-furnaanta dowladda.
Sannadki 2020, Navalny ayaa ku sigtay inuu u dhinto sun, kaddib marki lagu weeraray kiimikada nerfaha ee loo yaqaanno Novichok taas oo uu fuliyay sarkaal ka tirsan ciidanka amniga Ruushka. Kaddib marki lagu soo daweeyay dalka Germany, dib ayuu ugu noqday Ruushka bishii Jannaayo ee sannadki 2021, isla markiiba waxaa la dhigay xabsiga.
Navalny wuxuu sii waday inuu ka hadlo xakamaynta Kremlin-ka ee xorriyadda hadalka ee Ruushka, iyo xannibaadaha sii kordhaya ee awoodda muwaadiniinta Ruushka si ay u helaan macluumaad iyo xorriyad uu midbo midka kale ugula xiriiri karo gudaha iyo dibaddaba.
Ololahaan ayaa sii xogeystay xilli uu Kremlin-ka doonayo inuu qariyo runta dagaalka wuxushnimada ah ee uu ku qaaday Ukraine, runtaas oo uu ka qarinayo shacabkiisa.
In ka badan 15,000 oo muwaadiniin Ruush ah ayaa la xiray kaddib marki ay ka qeybgaleen mudaaharaadyo ka dhan ahaa dagaalka Ruushka tan iyo 24-ki bishi Febraayo.
Waaxda Isgaarsiinta Russia ayaa xirtay inta badan warbaahinta madaxa bannaan ee ay dadka ka heli jireen xogta saxda ah, waxay sidoo kale xireen baro ku yaallay warbaahinta bulshada, isla markaana loo hanjabay saxafiyiin kuwaas oo loogu caga-jugleeyay sida rayidka kale in ay xabsi geli doonaan haddii ay ku dhiirradaan in ay si furan uga hadlaan dagaalka ka dhanka ah Ukraine.
Farriin u uku faafiyay bartiisa twitter, ayuu Navalny ku cabbiray dareenkiisa ku aaddan sida uu ugu mahadinayo taageerayaashiisa isaga oo yiri: "Taageerada ugu fiican ee aad siisaan aniga ama maxaabiista kale ma ahan naxariis iyo erayo dabacsan, ee waa ficil – dhaq-dhaqaaq walba oo ka dhan ah rajiimka tuuganimada iyo khaa’innimada ku dhisan ee Putin. Mucaarado kasto oo ka dhan ah dagaalkan danbiilayaasha."
Afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Price ayaa yiri, “Kiiska Navalny nasiib darro wuxuu ka mid yahay kuwo badan oo ay Kremlin sii wadaan in ay si xishood la’aan ah u daba dhigtaan, iyaga oo iska indha-tiraya xuquuqda dastuuriga ah ee dadka Ruushak iyo ballan-qaadyadiisii caalamiga ahaa ee ahaa in la ixtiraamo lana xaqiijiyo xuquuqul insaanka iyo xorriyadaha aasaasiga ah.”
“Hadda in ka badan sidii, dadka Ruushka waa in ay awoodaan in ay maqlaan codadka geesinimada iyo cisiga leh ee runta ka sheegaya qaladaadka uu sameynayo Kremlin-ka, kuwaas oo ka imanaya gudaha iyo dibadda.”